Indlu ebanzi, entsha kwaye ekhululekile.
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSila
Indlu yohlobo lwe-chalet ibekwe kwindawo esembindini wedolophu, le yindawo engenakubethwa ngokobuhle, ukhuseleko, ukuzola kunye nococeko. Ngezindlu ezintle ezigcinwe kakuhle kunye nezitiya ezintle ezenza imeko-bume ekhethekileyo xa uphuma kuhambo.
Imizuzu embalwa ukusuka kumbindi we-Atlántida kunye nomjelo weSolis Chico, iindawo ezintle ezithandekayo ukuzazi.
Phakathi kwezinto zayo eziluncedo, le ndlu inesilingi eziphezulu (ezenza iphole kakhulu), iWiFi kunye nepatio entle esembindini kunye nebarbecue engoyiswayo !!
Ibanzi kwaye ikhululekile kakhulu i-chalet yokulala ye-1, enendawo entle kakhulu, umoya kunye nokukhanya.
Indawo entle kakhulu kwaye wabelane ngamaxesha amnandi kwindawo egcinwe kakuhle kwaye entle.
Isanda kulungiswa, inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi
Ibekwe kwindawo ekhethekileyo malunga nobuhle, ucoceko kunye nokhuseleko. Yimeko ekhethekileyo yendawo yokuhlala, ngeyona ndlela ilungileyo yendawo yokuhlala, enezindlu eziphangaleleyo, izitiya ezigcinwe kakuhle kwaye apho imfundo kunye nokuthanda indawo nganye kubonakaliswa ngobuhle bangaphandle bezakhiwo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sila
Hola! Mi nombre es Sila Garabelli, soy artista, de ideología liberal, disfruto mucho conocer personas y compartir historias. Amo las expresiones artísticas en todas sus formas, por…
Ndihlala ndikhona ukuze ndikhonze iindwendwe zam kakuhle kwaye ndabelana nabo, ukuba bayathanda.
Ndiyathanda ukuhlonipha nokugcina umgama ocetywayo ngabo, ngovuyo olukhulu!
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R3074